ရွာသူား များခင်ဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာသူား များခင်ဗျာ
Posted by မောင်ရိုး on Mar 13, 2013 in Creative Writing, Members | 63 comments
ဘာဖြစ်မှန်းတော့သေသေချာချာမသိပါ ။သို့ သော် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတော့လုပ်ရမယ်ထင်ပါတယ်
ကဲ …စလိုက်ကြစို့ဗျာ ….
မန်းဂဇက် ( သင်္ကြန်စာ)
မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ခြောက်ယောက်နှင့်AD 2212 ခုနှစ်
မီးးးး ဗျို့  မီး မီး
အထက်ပါ ပို့ စ်များရေးသားခဲ့ ရာမှာ ကျနော့် ဘက်က လိုအပ်ချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာအမည်ပါဝင်သူများကို
ခွင့် တောင်းခွင့် မရခဲ့ ပါ ။ ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါ ။ မန်ဘာအရေအတွက် ၁၀၀ ကျော် ခန့် ရဲ့ 
အမည်များကို ရေးသားခဲ့ သော်လည်း ရေးပြီးမှသာ ကော်မန့် ဖြင့်တောင်းပန်ခဲ့ ရပါတယ် ။
ဟို တုန်းက ရေးခဲ့ တာဖြစ်ပေမဲ့  အခုချိန်မှာ စဉ်းစားမိတာကတော့ဝတ္တရာပျက်ကွက်သလိုများဖြစ်နေမလား
ဆိုပြီး ဒီပို့ စ်ကိုရေးလိုက်တာပါ ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အနှောက်အယှက်များဖြစ်ခဲ့ ရင် ကျနော့် တာဝန်မကင်းဖြစ်
ရမှာမို့စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
အကယ်၍များ ကျနော်ရေးသားခဲ့ သောပို့ စ်များထဲမှ ပါဝင်ခဲ့ လေသော မန်ဘာရွာသူားများအနေနဲ့  မိမိတို့ ရဲ့ 
အမည်တွေ ရေးသားခံရတာကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်မျြားဖြစ်ခဲ့ ရင် ကျနော်မောင်ဆာမိမှ လေးစားစွာ
အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါ တယ် ဆိုသည့် အကြောင်း ……..
နံမည်သော်လည်းကောင်း ပို့ စ်ကိုသော်လည်းကောင်း ဖျက်စေလိုပါကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်
ဖျက်ပေးပါမည့် အကြောင်း ……..
ခင်မင်ရသော ရွာသူားများကို အသိပေးပါတယ် ခင်ဗျား
ပို့ စ်များ နံမည်များ ဖျက်ဖို့ ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မော့များနှင့် တကွ သဂျီးမင်းကို အကူအညီတောင်းပါတယ်ဗျို့ 
သဂျီးမင်းနဲ့  မော့ များခင်ဗျာ
member only မလုပ်လိုက်ရလို့ကူညီပါခင်ဗျ
အဲဒီ ပို့(စ) တွေ အားလုံးထဲမှာ အနော့ နာမည်မပါလို့ အသစ်ရေးပေးပါ။
ကျန်တာတော့ သူများပြောလိမ့်မယ်။ :harr:
ရွာနဲ့  အဆက်ပြတ်နေလို့ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်နေရတာ
ဟိုဖတ်ဒီဖတ် ကြည့် ရင်းနဲ့  နဲနဲ တွန့် သွားလို့ကြိုတင် တောင်းပန်ထားတာလေ
ရွာထဲမရောက်တာ တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် လိုက်မမှီတော့ ဘူးဗျို့ 
ခင်းလိုက်တဲ့ အခင်းလေးက တော့ လှမှလှပါဘဲ။
ဘယ်ရမလဲ … တခါက ကျနော်လည်း မားကက်တင်းသမားဘဲ
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းနဲ့  ပွိုင့် ရှာလိုက်တာပေါ့ဟဲဟဲ …….
မလှုပ်ဝံ့ ပါဘူးဗျာ အသံကြားရင် လန့်လန့် နေလို့ဟဲဟဲ
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ကြိုပြေးထားရတာဗျို့ 
အော်ကိုရင်ဆာမိတော့ ဒီမှာ ခုံပေါ်တက်အော်နေပါတယ်ဆို ခုံကို လာလှုပ်နေပြန်ပီ……..
တူတယ်ဗျာ တူတယ်… အဲဒီပို.စ်တွေဘာလို.ဖျက်ရမှာဒုံးဗျ.. ဘယ်နှယ့်ဗျာ..
ဒီလောက်ကောင်းဒဲ့ဟာကို ဟာဘဲ ဟာဘဲ အဟွန်. အဟင့်ဟင့်…
အခုတော့ အဲဒီပို.စ်တွေ ပြန်ဖတ်လိုက်အုံးမယ်.. သင်းခရု
ဘာမှမဖြစ်ဘူး… ပြန်အိပ်…ကျွတ်…ကျွတ်… ကျွတ်…
၂၇ရက်နေ့မနက် လက်ဖက်ရည်တိုက် မုန့်ပါကြွေးမှအဆင်ပြေမယ်…
ပွါးရအောင် ဟိုကောင်နာလေးတွေပါ ခေါ်ခဲ့ဦး… အား ဟိ
သိပါဘူးဗျာ …အိမ်မက် မက်ပြီးလန့် နိုးလာလို့ ပါ
ပြန်အိပ်ပြီဗျို့  ….
ဟားးး ပြန်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်စ
စိတ်ချ စောင့် နေမယ် ။ စုထား စုထာား ပွားစရာတွေ ဟဲဟဲ
ဦးကျောက်ပြောနေတယ် ၂၇ တဲ့ 
အရက်သမားတော့ မရေးပါရစေနဲ့ တော့ ဆရာရယ်
အိမ်မက်တွေ မကောင်းလို့ ပါ :harr:
ဆိုတော့ နောက်အသစ်ရေးရင် .
အရက်များများသောက်ရမဲ့ အခန်းတွေ ပြောင်းသုံးပေးပါ…
(ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးလို့ ချစ်လို့ ခင်လို့ မန့်ချင်လို့ကို ၀င်မန့်ပါ၏.. )
ကျော့်ကိုလည်း အယက်သမားနေရာမှာ ထား သုံးပေးစေလိုပါဂျောင်းးး
ကျော်နဲ့ ကိုမတ် လည်ပင်းဖက် အယက်သောက်ရင်း သွားလေသူ ဖွတ်တီးကတ်အကြောင်း
တမ်းတမ်းတတ ပြောဂျတာမိုး တဇာတ်လောက်ရေးပေးဘာ…
ဟေ ….. ဖွတ်တီးကက်ကြီးသွားပြီလား
ဘယ်ကိုလည်း ….ရထားသွားစီးတာတော့ဟုတ်လောက်ပါဘူးနော ဟေးဟေး
အယက် အကြောင်း ရေးရင် အရင် အယက်သောက်ရလိမ့် မယ်ထင်တယ်
ကဲ ကဲ အရက်သွားချက်လိုက်ဦးမှ
ပြီးရင်ခေါ်လိုက်မယ် ဝေ့  …..
သစ်ဆွေးလှေ အစုတ်လေး တစီး
လှော်ခတ် စီးသွားတယ် လို့
သြော် ဘယ်သူများလည်းမှတ်တယ် မိုးစက်ကို ပေါင်လယ်လောက်စကပ်အကွဲနဲ့ စင်ပေါ်တက်ခိုင်းတဲ့ အူးလေးကြီးပဲ.. ခါတော်မီပွိုင့်ရှာနည်းလေး အတုခိုးသွားပါတယ်ရှင့် ..
နာမည်သုံးထားတာ ကျေကျေနပ်နပ်သဘောတူကြောင်း ပို့စ်တင်ပြီးပြောပေးရမလားဟင်င်င်င် ;)
ရပါပြီခင်ဗျ …. ဟဲဟဲ တော်ကြာ ပုံပြင်ထဲကလို သူ့ ကနုယ်လိုက်ပ်ို့ 
ကိုယ့် သူလိုက်ပို့ နဲ့  မိုးလင်းသွားပါလိမ့် မယ်ခင်ဗျ
သြော် … ဟော်
တော်တော်လေး ကံဆိုးရှာတဲ့  ဖက်ဖက် ပါလားကွယ်
နောက်တခါပို့စ်ရေးရင် သများကို မင်းသမီး အဓိဇာတ်ဆောင် ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံ မီးထိုး မှန်ပြ မိတ်ကပ်ပြင်နေရာမှာ ထားပါလို့ေိေိ
ဟုတ်ပြီဗျာ …. မှတ်ထားလိုက်ပြီ
နောက်တစ်ခါ မင်းသမီးဖြစ်စေရမယ် ။
မင်းသားကတော့ စိတ်ကြိုက်ရွေးပေး …. )
ဒီလိုပဲအစ်ကိုရေ အသစ်မထုတ်နိုင်တော့အဟောင်းကိုပြန်ဆိုကြတဲ့ 
ပြန်ဆိုတေး သမားတွေလိုပေါ့ 
ပွိုင့် ကလည်း တစ်သိန်းပြည့် ဖို့ရှစ်သောင်းလိုနေတော့…….
ကိုဆာမိ ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ၊
အတော်လူလည်ကျတယ် အမည်ပါမပါ မသေချာရင် သူတင်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့်တွေ အားလုံးပြန်ပြီ
ဒါကြောင့်လည်း ကိုဆာမိရိုက်ချက် လို့ ခေါ်ရလောက်ပေတယ်ဗျ။
( အခြားဟုတ်ဘူးနော် ကီးဘုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီပိုစ့်တင်လို့ပြောတာပါ)။
ကျွန်တော် အမည်နာမ ခင်ခ ကို သုံးစွဲခွင့်ပေးပါတယ် ကိုဆာမိရယ် ပြန်ဖျက်ရန်မလိုပါကြောင်း ….. အဲဒါပြောမလို့။
မိဗုံလည်း ဦးလေးဆာမိကို ထည့်ရေးဖူးတယ် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ အဲ့ဒီတုန်းက ဦးဆာမိဆိုတာ ဒီလောက်ချောမှန်း သိဘူးလေ ခုသိသွားလို့ နောက်တစ်ခါရေးရင် မင်းသားနေရာက ရေးတော့မယ်
ကျုပ်အတွက်က မလိုပါဗျာ ။လုပ်ချင်သလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျ ။မြှောက်ပြောပေးလို့နောက်တစ်ခါရန်ကုန်လာရင် မုန့် ဝယ်ကျွေးမယ် ကျေးကျေး …
လကဘက်ရည်တိုက်ဖို့ချိန်းခဲ့ ပါရောကွယ်
မောင်ရင်မှမအားပဲ ။ ဦးကျောက်ပြောတယ် ၂၇ တဲ့  မှတ်ထားဦး
လက်ဘက်ရည်နဲ့  မရရင် ဘီဘီ နဲ့  လဘ်ထိုးမယ်ဗျာ …ကဲ ဘယ်လိုလဲ
ခက်တာက ကျုပ်က ဘီဘီလဲမကြိုက်ဘူးဗျ
အိုဗျာ ဘာကြိုက်ကြိုက် ရစေရမယ် …..
မဒမ်ပေါက်ကိုတော့ကိုယ်ဟာကိုယ် ကြည့်ပြောနော်
ကျနော်မပါ ဘူး :hee:
” အိုဗျာ ဘာကြိုက်ကြိုက် ရစေရမယ် ”
ဟီ ဟိ ၊ ဒီ အပြောကိုတော့ ၊ ကြိုက်သွားပြီ ။
ဦး ဆာမိ ကို ချော့ပေါင်းထားရမယ် ။
ဟီ ဟိ ၊ အဘ ကြိုက်တာတွေက အများကြီးရယ် ။
အခုက ၊ နွား မြင်တိုင်း လက်ညှိုး ထိုးနေသလိုကို ဖြစ်နေတာ ။
လက်ဖက်ရည် တိုက်မှ ကြေမယ် …
မောင်အံဇာ ငါကတော့ လက်ဖက်ရည်ပွဲလောက်နဲ့မကျေနပ်နိုင်ပေါင်ဗျာ။
အဖွားကြီးမို့မေ့တောင်နေပါပြီ ကဆာမိ ရယ်။
အခု ဖြစ်တဲ့ အမှု ကိစ္စက ဖြစ်သင့်လို့ ဖြစ်ခဲ့လိုက်တာပါ။
အရင် ကစာတွေမှာ မကျေနပ်ရင် အရင်ကထဲ က ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။
ဒီတော့ အရင်က ရေးခဲ့တာတွေက အမှု ကိစ္စ မဖြစ်သင့် လို့ မဖြစ်ခဲ့တာမို့ တောင်းပန်နေစရာ မလိုဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။
ကဆာမိ ရဲ့ စာတွေ ကိုလဲ ပျောက်မသွားစေချင်ပါဘူး။
မတွေ့ တာတောင်ကြာပေါ့ အရီးရေ
ခုကိစ္စကတော့ ဘာမှန်းမသိပါဘူး ။ သူများတွေရေးကြတာက လက်ပွန်းတတီး
ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေရေးကြလို့အဆင်ပြေပေမဲ့  ကျနော်လုပ်လိုက်မိတာက
ကျနော့် ကိုမသိကြတဲ့ သူတွေတောင်ပါတယ် ။ အလွှာစုံလည်းရေးထားတာဆိုတော့ 
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရီးလာအားပေးတာကျေးကျေးဗျို့  ….
ကျေးဇူးပါဗျို့  ။ ဝမ်းသာတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာမိပါကြောင်းးးးးးး
ရွာနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတုန်း သဂျီးစည်းကမ်းကြည့် ပြီး လန့် သွားလို့ ဗျို့  ။လိုရမယ်ရ ကြိုကာထားတာ
အခု ဖြစ်တဲ့ အမှု ကိစ္စက ဖြစ်သင့်လို့ ဖြစ်ခဲ့လိုက်တာပါ။
ဘက် မတူ အသက်မတူပေမဲ့
ပ၀ါမကူ ရေမရှူတဲ့ ပွဲတော့ ရွာထဲ ဖြစ်တော့မယ်ထင် …
ဦးကြီးမိုက် နှုတ်စီးတယ် …. တကယ့် လက်ဝှေ့ပွဲကြီးတော့ ဖြစ်လာတော့မယ်
၂ခါရှိပီဆိုတော့ ၃ခါမြောက်အောင်တော့ စောင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ………….။
ဆောရီး ဦးဆာမိရေ ဦးလေးပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း သွားတွေ့မိလို့
အဲဒါ မင်းကို တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ပြောတာမဟုတ်တာမို့ အဲဒီလို ထင်ခဲ့ရင် အရီး တောင်းပန်ပါတယ်။
ရွာထဲက ကိုယ့်ညီအစ်ကို ညီအစ်မ တူ/တူမ တွေ နဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘဲ နေလိုတာပါ။
အညိုးထားပြီး ထေ့ငေါ့ ရန်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးထဲမှာတောင် တွေးမကြည့်မိခဲ့ဖူးပါဘူး။
မင်းကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့မိတာ တကယ်ဘဲ ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီရက် ရွာမှာ ပြသနာ စုံ နေတာလေး ကိုတော့ မင်းလဲ သိမယ်ထင်ပါရဲ့။
ဒီတော့ အချင်းချင်း သံသယ တွေ ပွါးနေမဲ့အစား ရွာကိုလုံအောင်သာထိန်းဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။
စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းလေးကို သတိတရှိမိတာက ငါ့အတွေ့ အကြုံနဲ့ မင်းကွာခြားလေတော့ ငါ့ စကားမင်းနား
လည်ဘို့မလွယ်ဘူး မနုဿသ ဒုံ လဘ ::::))))
ဘာဒဲ့ ယောက်ကျားမှန်ရင် မစောင်းမြောင်းရဘူးဆိုလား..
အဟက်(တမင်သုံးပါသည်)ဆိုတော့ အရီးပြောတာ (စေတနာပါမှန်းကို)သဘောပေါက်နားလည်ခံစားလို့ရပါ၏..။
တခုပါ..အသက်ကြီးတိုင်း အတွေ့အကြုံတွေ များတိုင်း ဖင်ထောင်ဘုရားထူးလုပ်ရမယ်လို့ ဒီရွာမှာ စည်းကမ်းများရှိလားမသိ..
မတူတဲ့ အမြင်တွေ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆို..
ဘိုလိုကြောင့် လူကြီးဆိုသူပြောရင် ဘဇပ်ပိတ်နှုတ်ဆိတ်
လက်ခံဖို့ လိုက်သတိပေးနေရသဒုန်း ကိုယ့်ဆြာအပေါင်း တို့ရယ်..
လွှတ်တော်မှာသွားချောင်းနေလို့ခုမှ Reply လုပ်ဖြစ်တာ
လာအားပေးတာ ကျေးကျေးဗျို့  ….
ဗျိုးးးးးးး ကိုအောင် နဲ့  ကိုမတ်
လက်ဘက်ရည်သောက်ကြမယ်ဗျို့  …..
ပြီမှရွာထဲတူတူ ပတ်ကြတာပေါ့နော ….
ကိုဆာမိရေ ပြည်ပက ကျနော်ကကျနော်ဒို့ရဲ့ မရှိလည်းစား ရှိလည်းစား မကောင်းလည်းကိုယ် ကောင်းလည်းကိုယ်ပါဗျာ နေသားကျနေပါပြီ မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ ဆလံမာလေးကိုးပါ (ဆရာဖောပြောတာတွေမှန်တယ်) ပြည်တွင်းကလူတွေကြံစည်တိုင်း အောင်မြင်ကြ ဖို့ လိုတရင်ရဖို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အောင်မယ်။ အမတ်မင်း က ဒီမှာလာပြီး ကွန့်နေပြန်ပြီ အစ်မပဒုမ္မာရေ့။
ကလေးတစ်ယောက်ကို သူ့အဖေက ကားမောင်းသင်ပေးတယ်။
တစ်ခြားအချိန်မှာ ဒီကလေး က သူ့အဖေ ကို ပြန်ဆင်ခြေ တက်ခွင့် ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို ကားမောင်းသင်ချိန်မှာ ခိုင်းတာလုပ်၊ ဆင်ခြေမပေးနဲ့ လို့ ပြောရင် သူ့အဖေ ကို လွန်တယ် ပြောမလား။
ကားမောင်းရင်း ရှေ့မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ အန္တရာယ်တွေ အတွက် ကားမောင်းသင်စ ကလေး မှာ အတွေ့အကြုံမရှိ လို့ သူ့အနေနဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ် နဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်တာ နားလည်ရမယ်။
ကွန်ပျူတာကို ကလိတာ သူ့အဖေထက်တော်ချင်တော်မယ်။ အဖေကို ပြန် ဆရာ လုပ်နိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကားမောင်းရာမှာတော့ သက်တမ်းရှည်ပြီး အတွေ့အကြုံများ တာ သူ့အဖေမို့ သူမကျွမ်းကျင်ချိန် အဖေ့ စကားကို တသွေမတိမ်း နားထောင်မှ ဘေးကင်းမယ်။
အရှိန်လျော့ဆိုရင် လျော့ဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုပြီး ကွန့်နေရင် ရှေ့မှာ တိုက်ကုန်မှာ။
ဒါကို အဖေ က အသက်ကြီးတိုင်း အတွေ့အကြုံတွေ များတိုင်း အနိုင်ကျင့်တယ် ပြောလို့ မရဘူး။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲ မောင်မတ် ရေ။
ဒီပုံပြင်လေးကို မင်းရဲ့ ကလေး ကို ကားမောင်းသင်ပေးချိန် သတိရ ပေးနော်။
ရွာထဲမှာ ဘယ်လူကြီးမှ အလကားနေရင်း အတွေ့အကြုံတွေ များတဲ့ ငါကွ လို့ ယစ်မူးမနေကြပါဘူး။
(အဓိက အရက်မသောက်တဲ့ အရီး တို့ အဖွားကြီးတွေပေါ့။)
ကျနော်ရေးချင်တဲ့လိုရင်းက လူကြီးတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာကို ပျက်ရယ်ပြုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော့.. လူတိုင်းကိုယ်စီ ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ရှိကြတာပဲ.. ဆိုတာကိုလက်သင့်မခံချင်ပဲ. လူကြီးတွေနဲ့ ဘာလို့ဖက်ပြိုင် ဘက်တိုက်ပြောနေတာလည်းဆိုပီး ၀င်ထောက်ချင်သူများ. ၀င်နှိမ်ချင်သူများ.၀င်ကလိချင်သူများကို ဆိုလိုတာပါ နော့..။ ကျနော်လည်း စာဖတ်သူအစွဲရှိတာပဲရယ်..ကျနော်လည်းကိုသစ်မင်း၊အရီးလတ်တို့ကို သဘောကျပါတယ်.တော်တာကိုး.စာရေးကောင်းကြတာကိုး.
ဒီလိုကျနော်ကြိုက်မိတာနဲ့ပဲ.အရီးတို့တွေ တခြားကိစ္စ.အယူအဆမှာ ငြင်းသယောင်ဖြစ်တာနဲ့ပဲ.မနှစ်သက်တဲ့တဘက်ကို အယူအဆသဘောတရားမပါဘဲ ၀င်ထောက်လိုက်တာ.ရိလိုက်တာမျိုးမလုပ်မိအောင်နေပါတယ်..
လုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်း စိတ်ပျက်တာ ချဉ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပါ ။
ကျနော့အရေးအသားမှာ အရီးတို့လူကြီးများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို စော်ကားလိုရင်းမပါဘူးဆိုတာ နားလည်ပေးပါ..လို့…။
နောက်တခု.မြန်မာပြည်ကလူတွေကို.အလကားနေနှိမ်ပြနေပီး ကျုပ်တို့က ကိုယ်တွေကဘယ်လိုပါ ဆိုပီး ကိုယ့်ဂုဏ်ဖော်ပြချင်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ အတွေးမျိုး(သူတို့အဖို့တော့ကြီးကျယ်မှာပေါ့)
လုပ်ကွက်မျိုး သုံးနေကြသေးတာလည်း ချဉ်ဖို့ပိုကောင်းသဗျ..
က ရဲစည် ရေ ။
အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ က ၊ က ရဲစည် နှင့် လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူး ။
သူကြီး ဘာကိုပြောသလဲ ဆိုတာကို တကယ် သိတဲ့လူ ၊ နည်းနည်းလေးပဲ ရှိပါတယ် ။
အဲဒီ သိတဲ့လူ နည်းနည်းလေး ကလည်း ၊ ပြန်ပြောလို့တော့ လုံးဝ မရပါဘူး ။
သူကြီး ဘာကြောင့် အဲလို ပြောခဲ့ရတယ် ဆိုတာကိုလည်း နားလည်နေကြတယ် ။
အဲဒီမှာ ၊ သူကြီး ကို စာနာပြီး သူကြီး ဘက်က ကာကွယ်ပေးနေမိ ရတယ် ။
အဲဒီတော့ ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ၊ စိတ်ရှည် ၊ သည်းခံပေးပါကွယ် ။
အဘ ၊ ကြားက တောင်းပန်ပါတယ် ။
အခု နောက်ဆုံး ၊ သူကြီးလဲ Satire ရေးတာကို မတားတော့ပါဘူး ။
ကြည်ဆောင်းလဲ တစ်ခါပါဘူးပါရဲ့ …
ကိုယ့်နာမည်မြင်တော့ဝမ်းသာသွားခဲ့တာကိုလဲ မှတ်မိတယ် ..
အမည် ကို ခွင့်ပြုချက် မယူပဲ သုံးထားတဲ့ အတွက် လုံးဝ(လုံးဝ) မကျေနပ်ပါဘူး
အရမ်း အရမ်းကို တင်းနေတဲ့ အတွက် လျော့သွားအောင် ဘီယာတိုက်ပြီး အနှိပ်ခန်း လိုက်ပို့ပေးပါ
နောင် ထည့်ရေးမှာတွေ အတွက်လဲ ကြိုတိုက်လို့ ရပါတယ်
အရင်ကပဲ ရေးရေး နောက်ပဲ ရေးရေး အေးဆေးဖြစ်ကြောင်း လာ လက်တို့ တာပါ
တကယ်တိုက်ပါ့ မယ်ဗျာ ဟဲဟဲ
လိုက်လည်းပို့ ပါ့ မယ်ဗျာ …ထွက်မပြေးကြေးနော်
မအားတဲ့ ကြားက လက်လာတို့ တာလည်း အားနာပါ့ ဗျာ
ကျေးကျေး (တကယ်တိုက်လို့ မသောက်ရင်တော့တိုင်ပြောမယ် :harr: )
တကယ် လန့် သွားတယ်ဗျို့ 
ဒါမျိုးသဂျီူးမပြောဖူးဘူးလေ ။
ဒါကြောင့်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်လိုက်တာ ….
ဒီလို တောင်းပန်ရုံနဲ့ ရကြေးလား။
အကုန်ပြန်လိုက်ဖတ်ပြီး နာမည်မပါတဲ့ ပို့စ်ရှာမယ်။
ကိုဆာမိ သာ ကျုပ် ရဲ့ ဂေဇက်နာမည် မောင်ပေ ဆိုတာ ကို သုံးပြီး ရေးမယ်ဆိုရင်
ဥမပါ ကြာကူလီ အခန်းနှိုက်သော်လည်းကောင်း
သို့ ဒါမှမဟုတ် ၊ အခြား မည်သည့် ဇါတ်ခန်းနေရာတွင် လည်းကောင်း
အိုဗျာ သုံးချင်သလို သုံးဗျာ
အတော်ဂို ကြာဂူလီ ဖစ်ချင်နေဒယ်ပေါ့လေ…………
သိပြီးသားလေ ဆရာပေရဲ့ ။ယုံပါတယ်ဗျ
တားမြစ်ထားပြီဆိုတော့နောင်ရေးဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး
အခြားသူတွေကိုလည်း အားနာမိလို့ ပါ ။ ကျေးဇူးဗျို့ 
ချဲထုိးချင်ရင်တော့ရွတ်လို့ ကောင်းတဲ့ ဂဏန်းထိုးဗျာ
ကိုရင်လည်း ရွာထဲ သိပ်မရှိတော့မျက်စိလည်နေပြီထင်ပါ့ 
ကိုယ့် ညီရေ …. ပြောပေးမယ်ကွယ် စိတ်ချ
ကျွန်တော့်ကိုလည်း…ချစ်သုဝေတို့ က အသည်းအသန်လိုက်ကြိုက်နေရတဲ့ 
အမှန်ရေးတာပဲ. ။ ဘာ စိတ်ဆိုးစရာရှိလဲ. ။
ခေါင်းစဉ် ကြည့်ပီး ရွာသူားများခင်ဗျာ ဆိုတော့………
ဘိုးတော် ဆာမိ ဂဏန်းများပေးမလို့လား ဆိုပီး အပြေးအလွှား ၀င်ဖတ်လိုက်တယ်………
ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီးမှ ကန်တော့ကန်တော့ ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အန်ကယ်ကြီးရေ ……
ရွာထဲမှာ ရွာသူားအချင်းချင်း ချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ ထည့်ရေးတာ စနောက်တာ အားလုံး….
လွှတ်တော်မှာသွားချောင်းနေလို့ခုမှအကြောင်းပြန်ရတယ်ဗျ ။
ကျနော်လည်း ပွိုင့် အတော်ကြီးခိုင်သွားပါပြီ
ကျုပ်ကိုခွင့် လွှတ်ဗျာ ။ ဦးမာဃဆိုတာဒီရွာမှာရှိမှန်းသိပေမဲ မထိရဲလို့ ပါ
တော်ကြာမိုးကြိုးသွားနဲ့ ခွင်းမှာကြောက်လို့ 
ဗျို့  …ကိုသြရကြီး
ကျနော့် ပို့ စ်တွေမှာ လာအားပေးနေကြဆိုတာသိပါ့ ဗျာ
နောက်တစ်ခါ အခွင့် သင့် ရင် …… စိတ်ချဗျို့ 
ဘယ်သူ ကျေနပ်နပ် မကျေနပ်နပ်
ဦးမာဃကတော့ လုံးဝလုံးဝ မကျေနပ်ဘူး
တစ်ပုဒ်လုံးသာ ဖတ်တယ် သိကြား မပါဘူး
နောက်တစ်ပုဒ် ထပ်ဖတ်တယ် သိကြား မပါဘူး
ထပ်ပြီး ဖတ်ပြန်တယ် သိကြား မပါဘူး
နောက်တစ်ခါ ဦးဆာ ရေးလို့သိကြား မပါရင်
လူ့ပြည်ဆင်းပြီး ဝရဇိန်နဲ့ ကို ပစ်မယ်
(အခုတော့ ဝရဇိန်က ပန်းတိမ်ရောက်နေလို့ သက်သာသွားတယ်)
သကြား သကြား ..
၀ရဇိန် ပန်းတိမ်ရောက်နေတာ ဟုတ်ရဲ့လား။
ဟိုတစ်နေ့က အပေါင်ဆိုင်မှာ တွေ့မိလိုက်သလားလို့
မောင်ဝဏ( မရိုက်တတ်လို့ပါဗျ) တို့လဲ တကယ့် နိုင်ငံကျော်တွေ ရေးခဲ့သေးမှတ်တယ်၊ သူတို့လဲ ဒီလိုပဲ ရယ်နေကြတာ ပါပဲ။ အနော်လဲ စိတ်ဆိုးတယ်ဗျို့ ။ကိုယ်က ရွာထဲ အရောက်နည်းတော့ ဘုမှမသိ ဘူမှရေးကြဘူး၊ နောက်တခါ ပါအောင်ရေး၊ ဒါဗျဲ။
ဘာတွေ ဘီလိုဖြစ်နေတာလဲတော့ မသိဘူး .. ယောက္ခမကြီး .. ။ ပျော်လို့ ၀င်နောက်နေတာ … ခိခိ …
တခါကများ ဆို .. တူညားကို လူပုံအလယ် ပန်းဦးလွှတ်ပဲတောင် ရေးထားသေး .. ဟေးဟေး………. ။ တမီးကတော့ ယောက္ခမဂျီး ချိလို့ ရေးတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ် .. ဟီး … ။ တားငယ်လေး ပေးနော် … :hee:
အတည်ပြောပါမယ် …… တမီးနာမည်သုံးချင်တဲ့ အချိန် သုံးချင်တဲ့ နေရာမှာ ရေးချင်တာရေး .. အေးချေးပါ … ။
စိတ်မထင်ရင် တခါတခါ .. ထဆဲ တတ်တာက လွဲလျှင်ပေါ့ ..အဟီးးးးးးးးးးး နောက်တာပါ ရေးလိုက ရေးနိုင်ပါအိ .. ပြတနာ မချိပါဝူးးးးးးးးး စကားကုန်ပြောထားဘီးဘီ .. ဂျိုကျိုးနားရွက်ပဲ့ ခွာလိပ်အမြီးကုတ်….. ဘယ်နေရာထားထားပါ .. စာရေးသူရဲ့ စေတနာပေါ့အေ … ခိခိ ခွိခွိ ။
ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဘယ်ရေးပါ့ မလဲ ချွေးမ ဆိတော့ ….
မအားတဲ့ ကြားကအရောက်လာတာကျေးဇူးဗျို့ 
နောက်တစ်ပွဲကတော့အပြင်မှာဘဲ နွဲကြတာပေါ့ နော
ကဲ ကဲ ရွာသူားများခင်ဗျာ
အားလုံးလဲ သူ့ နည်းသူ့ ဟန်နဲ့  ဗလုံးဗထွေးပြေလည်သွားကြပါပြီ
နေ့ တွက်အတော်စီသွားပြီမို့ခဏနားပါဦးမည်ခင်ဗျာ
အဓိက နဲ့ သာမည ကို
အပုံကြီး တင်ပါတယ် ဗျာ…
နစ်ခ်နိမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်လေ အနော်တို့လို ပြည်တွင်းက မျက်နှာမွဲလေးတေကို ဦးစားပေးပြီး
ရှေ့တန်းတင် (စစ်မြေပြင်မပါ) ရေးစေလိုကြောင်း
ပြည်ပကလူတွေအနေနဲ့က လိုတိုင်းတ ရကြပြီးသားမို့
ပြည်တွင်းက အခုမှ တောင်းမယ်ကြံ ဟန်ပြင်နေတဲ့ လူပြိန်းလေးတွေကိုယ်စား
ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်.. နောက်တစ်ခါရေးရင် လုံမလေးကိုလည်း ထည့်ရေးပေး… အနော်လည်း ပြည်တွင်းနေ … မြန်မာငွေစား.. မျက်နှာမွဲလေးပါ…
အန်ကယ်ရေ…နာမည်ထည့်လို့စိတ်မဆိုးပါဘူး.. ဆန်ပြုတ်ကျွေးရင်တော့ တမျိုးပေါ့
လေးဆာမိ ပိုစ့်တွေထဲမှာ ကျနော်မပါဝူး ပြန်ထဲ့ရေးပီးတင်ပေးပါ.. သားလဲပါချင်တယ်.. သားလဲပါချင်တယ်.. သားလဲပါချင်တယ်………….. အိမ်သာထဲမှာ
လေးလေးခ…………… ဖားအော်သံတွေဆူနေတယ် သားနားညီးတယ် အိပ်မရ၀ူး
အိပ်မရ၀ူး အိပ်မရ၀ူး အိပ်မရ၀ူး အိပ်မရ၀ူးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နာ့ကို ဗီလိန်ခန်းက ပေးမယ်ဆိုရေးလေ……… အရက်ဒွေမူးပြီး ကောင်မလေးဒွေကို ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တဲ့နေရာမျိုး ကလွဲရင် ကျန်တဲ့နေရာတွေ လျှောက်မရေးနဲ့ အပြင်မှာမလုပ်ခဲ့ရဖူးလို့ တစ်ခါတစ်လေး စိတ်ကူးကြည့်ဒါ …… အဲဒိလို လုပ်ခဲ့မိရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဆိုပြီး ….။